Kôrea Avaratra - Wikipedia
Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk ko
Repoblika demôkratika entim-bahoakan'i Kôrea ((mg))
Teny filamatra : 강성대국
(firenena matanjaka sy manambina)
Teny ofisialy Koreana
Tanàna ngeza indrindra P'yŏngyang
- Filoha mandrakizay
Repoblika entim-bahoaka juche ambanin'ny rafitra antoko tokana
- Rano (%) faha 97
- hakitroka faha 49
23 479 089 mpo.
Anaran'ny mponina Kôreanina avaratra
Sandam-bola Won (₩n) (KPW)
Faritr'ora UTC +8:30
Hiram-pirenena A ch'im un pinnara,
i kangsan ungum e  Chant patriotique
I Kôrea Avaratra, na Repoblika demôkratika entim-bahoakan'i Kôrea, dia firenena mivelatra any avaratry ny Saikanosy Kôreanina any avaratra-atsinanan' i Azia.
I Kôrea Avaratra dia mizara sisin-tany amin' i Sina (1 416 km) any avaratra, amin' i Rosia any avaratra-atsinanany (19 km) ary amin' i Kôrea Atsimo (238 km). Ny faritra misy ny sisin-tany manasaraka an' i Kôrea Avaratra amin' i Kôrea Atsimo dia anisan' ny faritra be mpiambina indrindra eto an-tany: iray tapitrisa mahery ny isan' ny olona miambina io sisin-tany io.
Anarana[hanova | hanova ny fango]
Ny anarana fohin' i Kôrea Avaratra dia Puk Chosŏn, amin' ny fanoratana Hangul 북조선 ; amin' ny fanoratana Hanja 北朝鮮 ; hita koa amin' ny haino aman-jery kôreanina tatsimo Buk Han amin' ny fanoratana Hangul : 북한 ; amin' ny fanoratana Hanja : 北韓.
Ny anarana lavan' i Kôrea Avaratra dia "Repoblika Entim-bahoakan' i Kôrea" (Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk, fanoratana Hangul : 조선민주주의인민공화국 ; fanoratana Hanja : 朝鮮民主主義人民共和國).
Ny anarana ôfisialy Chosŏn (Kôrea, na "Tanin' ny Maraina") any Kôrea Avaratra dia avy amin' ny anaran' ny dinastia farany nanjaka talohan' ny fanafihan' ny Japôney, ny dinastian' ny Ri na Choson (1392-1910). Any Kôrea Atsimo, ny anarana ôfisialy dia Hanguk, midika "firenen' ny (guk) Han", anarana foko prehistôrika nipetraka tany antsimon' ilay tanjona. Ny anarana hoe Kôrea indray dia avy amin' ny dinastia Koryŏ nanjaka tany Kôrea tamin' ny 918 hatramin' ny 1392. Ny hoe Kôrea dia avy amin' ny fiovam-bika ara-baninteny italiana tamin' ireo Eorôpeana tonga tany Azia tamin' ny taonjato faha-15, izay nanome ny hoe Corio sy Coria ary Corea.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kôrea_Avaratra&oldid=1040755"
Voaova farany tamin'ny 3 Desambra 2021 amin'ny 14:44 ity pejy ity.